यी आधा दर्जन कम्पनी शेयर निष्कासनका लागि पर्खाइमा, कुनको कति ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > यी आधा दर्जन कम्पनी शेयर निष्कासनका लागि पर्खाइमा, कुनको कति ?
यी आधा दर्जन कम्पनी शेयर निष्कासनका लागि पर्खाइमा, कुनको कति ?
काठमाडौं । हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि ६ कम्पनीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् ।
नागरिक लगानी कोषसहित श्रीराम सुगर मिल्स, अरुणभ्याली हाइड्रोपावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ङादी ग्रुप र बरुण हाइड्रोले बोर्डमा निवेदन दिएका हुन् ।
बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीहरुले विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति पश्चात मात्र बोर्डमा पेश भएको निवेदन स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिएको छ ।
बोर्डले २०७६ जेठ ७ गते विद्युत् नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति पेश गर्न ङादी र बरुण हाइड्रोलाई भने पनि हालसम्म यी दुवै कम्पनीले विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति पाएको कागजात बोर्डमा पेश गरेका छैनन् ।
पछिल्लो समय भने हकप्रद शेयर निष्कासनमा कमि आएको छ । हाल समृद्धि फाइनान्सको २०० प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्रीमा रहेको छ भने नेपाल फाइनान्सले १२५ प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री गर्न असोज १९ गते बोर्डबाट स्वीकृति पाएको छ । आर्थिक अभियानबाट
२०७७ असोज २७ गते ११:५७ मा प्रकाशित
जनरल इन्स्योरेन्सको कारोबार नहुने, यस्तो छ कारण !
मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा कोरोनाविरुद्धको लडाईमा डा. झा र अन्य चिकित्साकर्मीलाई बधाई
स्प्यारो एसएमएस दशौँ वर्षमा, १८०० भन्दा बढीलाई मोबाईल मेसेजिङ सेवा प्रदान गर्दै
आणविक परीक्षण झनै बढाउने उत्तर कोरियाको चेतावनी !